Akụkọ - Ọdịnihu mmepe nke ụlọ ọrụ mmetụta
N'ezie chere dị ka ndị kasị ibu n'ụwa na-emepụta owu na kemịkal eriri emeputa, China ewuwo ndị kasị ibu na kasị zuru ezu usoro nke textile ụlọ ọrụ, textile ụlọ ọrụ metụtara ụlọ ọrụ elu-ọsọ mmepe, bụ isi jikoro nọgidere zuru ezu, akpan akpan, China nwere a bi. nke otu ijeri narị atọ na-aga n'ihu na-amụba na ịkwalite ahịa ahịa anụ ụlọ, ọ bụghịkwa ogologo oge na-elekọta mmadụ nke gburugburu ebe obibi na amụma mepere emepe.
Iji mezuo nke a, Du Yuzhou, onye isi oche nke China Textile Industry Association, kwenyesiri ike na ihe ndị a dị n'ime ime abụghị naanị na-akwado ụlọ ọrụ akwa China iji nyefe ihe owuwu ụlọ ọrụ mba ụwa, kamakwa na-enyere aka ịkwalite ikike nrụpụta ọhụrụ nke ụlọ ọrụ site na mba ọzọ. oke arụmọrụ.Na asọmpi mba ụwa na-abawanyewanye, uru agbakwunyere dị ala na-emepụta echiche na ohere uru na-ebelata kwa ụbọchị.
Ma n'otu oge ahụ, Du Yuzhou kwukwara ikwubiga okwu ókè na ụlọ ọrụ akwa China iji rụchaa ọrụ akụkọ ihe mere eme ọhụrụ, na-eche ọtụtụ nsogbu ihu. Na mba ụwa, ụlọ ọrụ akwa China na-eche asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ ihu, na-elekwasị anya nke asọmpi ji nwayọọ nwayọọ na-emewanyewanye ka ọ dị ọhụrụ. ọkwa nke ihe ịma aka ọhụrụ nke imeziwanye ikike mmepụta nke ndị bu ụzọ na transnational mmepụta mode. N'ụlọ, mmejuputa echiche nke nkà mmụta sayensị nke mmepe na-eche ihu ihe mgbochi dị ukwuu na mmepe dị ukwuu. Ọnụego mgbanwe, ọnụego ọmụrụ nwa, mgbanwe ụtụ isi na nchekwa ike na ikuku. mbelata
Imekọ ihe ọnụ n'etiti ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-anọchi ajọ asọmpi ime, na asọmpi n'elu ụdị ga-anọchi price agha.Innovation na ngwa ngwa nzaghachi dị ka isi ulo oru mpi elu aka.
Tụkwasị na nke ahụ, ndị otu azụmahịa ga-arụ ọrụ dị mkpa na-arịwanye elu.
Nke ise, ụlọ ọrụ mwekota bụ-apụghị izere ezere omume, otu, centralization, kpụ ọkụ n'ọnụ mmepe bụ ihe a na-apụghị izere ezere direction.Mgbe a zuru ezu mpi, ụlọ ọrụ iji mma ime mgbanwe na gburugburu ebe obibi na-adị ndụ, ga-arụsi ọrụ ike na nkwonkwo, site annexation reorganization ma ọ bụ a stratejik. mmekorita iji wuo nnukwu ìgwè dị iche iche, ghọta ego, mmepụta ikike, nkà na ụzụ, ikike mmadụ, mmekọ ahịa akụ nkesa, na-aghọta nnukwu-ọnụ ọgụgụ ọrụ na ulo oru mmepụta, ahịa mpi, na a zuru ezu ulo oru yinye dị ka a wholePut iji ọma si otú integral elu aka. nke ụlọ ọrụ, ugbu a otu omume na-egosi na ihe inkling na mmalite.
Enweela mbelata. China si cashmere ụlọ ọrụ akụrụngwa na nhazi uru ugbu a mba ọ bụla n'ụwa bụ ike iji tụnyere na dochie.The personage n'ime N'ezie nke ọmụmụ na-eche, ugbu a òkè nke mba anyị cashmere ngwaahịa na mba ụwa ga-enwe ọganihu n'ihu. Ụlọ ọrụ nwere ike ịmepụta ụdị nke ha site n'inweta ụdị ama ama nke mba ọzọ ma ọ bụ guzobe ụlọ ahịa nke ha.
Oge nzipu: Jul-22-2021